apple inogona kuburitsa iyo iphone 13 munaSeptember 24, muongorori anopa zano chiitiko chezuva
Kuru Nhau & Ongororo Apple inogona kuburitsa iyo iPhone 13 munaGunyana 24, muongorori anopa zano chiitiko chezuva
Wedbush muongorori Dan Ives kare yakaburitsa zvakawanda zvezvinotarisirwa zvitsva zveApple 13 maficha mune yazvino chinyorwa kune vatengi asi izvo & apos; zvinonyanya kufadza ndezvekuti iye zvino awedzerawo iPhone 13 kuburitsa zuva kufungidzira kunoenderana nekutarisisa kwake kwekutengesa.
Zvinoenderana neshumo rekutanga, iyo iPhone 13 inogona kunge iine 1TB yekuchengetedza sarudzo - fungidziro yaive chaiyo debunked neimwe sosi , asi ikozvino yadzokororwa nemuongorori, saka gadzira zvaunoda - uyezve wedzera LiDAR kamera kune ese akateedzana mamodheru echokwadi akawedzera chokwadi chinotora. Wedzera kune idzva kamera seti, 120Hz kuratidza, uye mabhatiri makuru anogona kuitika, uye iyo iPhone 13 inogona kuratidza kurova painomhara, asi ichaziviswa uye kuvhurwa riini?
Apple iPhone 13 chiitiko chekuzivisa uye zuva rekuburitsa
Chiitiko che iPhone 13: Gunyana 14
iPhone 13 kuburitswa: Gunyana 24
Maererano ne Memo yakagadziridzwa yaVaIves , Apple ichabata iyo iPhone 13 yekuzivisa chiitiko mu & apos; rechitatu vhiki raGunyana. ' Kutarisa nekukurumidza pakarenda kunoratidza Chipiri, Gunyana 14, sezuva rinogoneka re iPhone 13.
ASeptember 17 preorder kutanga haina kuoma kutora kubva pano, sezvazvakaita musi waSeptember 24 iPhone 13 kuburitswa, zvakare, sezvo Apple & apos; s Chipiri-Chishanu-Chishanu iPhone kudonha purogiramu yekuburitsa kazhinji inoenda.
Sezvinoenderana neWedbush muongorori & apos; s zvitengeswa zvekutengesa muAsia, Apple iri kubhengi pane iyo iPhone 13 kuti ive mutengesi mukurusa munhevedzano, iine 45% yemabatch ekutanga ayo Apple akarayira kuti aunganidzwe mukota yechitatu.
Yakazara iPhone mirairo yeanotarisirwa mana anouya 2021 mamodheru ayo muongorori anofungidzira kuva mamirioni zana kusvika zana nemakumi mashanu emamiriyoni ehafu yepiri yegore, nekota yechina, zvakasikwa, inomiririra huwandu hwakawanda hwekutakura.
Yekutanga iPhone 13 yekuraira iyo Apple yakabookerana nevatengesi kune mashoma anotevera makota anonzi ari mamirioni makumi maviri kupfuura zvaakakumbira iyo iPhone 12, saka timu iri muCupertino zviri pachena kunge inovhenekera nezve kukwidziridzwa kwedzinza kwairi kuzounza kune yayo inonyanya kuzivikanwa 2021 iPhone modhi. Zvingave zvinoreva here chiratidzo che120Hz pakupedzisira ? Nah, hatidi kuenda kure zvakadaro, zvirinani kwete yevanilla iPhone 13 .
renyeredzi tarisa 3 kuburitsa zuva
Diep.io (aka Tank.io ye iPhone) ongororo, hunyanzvi uye zano: ichi ndicho chinhu chitsva chinodhakwa mushure meSlither.io
Aya mazwi maviri anogona kusevha iwe mari pane kutsiva AirPods kuApple Chitoro
Dare rinotonga kuti FCC inogona kuvharira kutengwa kwakapihwa mari yeHuawei & apos; s 5G networking giya muU.S.
Yakanakisa tsika Android ROMs yeiyo Samsung Galaxy S5